I-Semalt-Ukuphakanyiswa kwe-SEO yokuGqibela
Ukunyusa iimpahla okanye iinkonzo kwi-Intanethi kusetyenziswa iwebhusayithi yakho yeyona ndlela isebenzayo yentengiso ngenxa yesantya esimangalisayo, indawo yokugubungela, kunye nokwenza lula. Iinkonzo zokukhuthaza iwebhusayithi ezifanayo zibonelelwa yinkampani ye- Semalt SEO. Wonke usomashishini / usomashishini ohamba nge-Intanethi ufuna ukufumana abathengi abaninzi kangangoko anakho kwaye enze iwebhusayithi yakhe ukuba ibangele ukugcwala kwitrafikhi eninzi kangangoko kunokwenzeka. Iingcali zeSemalt zinokukunceda ngalo msebenzi. Inkampani yethu ingaphezulu kwe-SEO-optimization, yinto enkulu kwihlabathi lonke kwinqanaba lokukhuthaza iwebhusayithi.
Isiteyitimenti esinjalo senkalipho asikho isizathu kwaphela. Funda ingxelo yabathengi kwiwebhusayithi yethu, jonga iimeko zokwenyani, kwaye uyakuqonda ukuba nguSemalt kuphela onokumelana nomsebenzi ngendlela engcono. Ngenxa yokusebenza kwethu kakuhle, sikhuthaza iiwebhusayithi ukuba ziye kwisikhundla esiphezulu kwiinjini yokukhangela kwaye sincede abanini bazo bazicebise. Ewe, ngaphandle kwetekhnoloji yokusika, awuzukuphumelela, yiyo loo nto uSemalt engayeki apho. Siyaqhubeka siphucula iindlela zethu, siphuhlisa itekhnoloji entsha. I-Semalt ayinakho okhuphisana ngokulinganayo ukuba injongo yakho yokuphumelela ngokuphuhliswa kwewebhusayithi-yenze kunye noSemalt.
Inkampani yethu ibonakaliswe ngumgangatho ophezulu wokusebenza kweendlela ezicetywayo zokusetyenziswa kwewebhusayithi. Akunangqondo ukuzisa iimpikiswano, sixhomekeke kuphela kwiinyani, eziqinisekiswe ziziphumo eziphumeleleyo. Kwiminyaka elishumi, besikhe sijongana nemiceli mngeni kakhulu kwaye sisoloko sisenza isigqibo esifanelekileyo. Ubugcisa bokunqoba busegazini lenkampani. Iqela le-Semalt liqela leengcali ezikumgangatho wehlabathi. Phakathi kwabo kukho iingcali ze-SEO ezinamava, abaphathi abaqeqeshiweyo, iingcali ze-IT, iikopi abanobuchule kuzo, kunye nabayili.
Ngaphandle kwengcali eguquguqukayo, ilungu ngalinye leqela liyazi iilwimi ezininzi zehlabathi kwaye likulungele ngokufanelekileyo ukwenziwa kwe-SEO. Kwinkqubo yokudala iprojekthi enobuchule, iqela elinamava lithathela ingqalelo zonke iintlobo ze paramitha ezichaphazela ukusebenza kwewebhusayithi. Kubalulekile ukuba nokucinga okucwangcisiweyo, njengoko isiza ngasinye sivelisa imeko nganye, oko kufuna indlela ehambelanayo kunye nendlela yokusebenzisa i-SEO.
Uvavanyo lwe-SEO oluNgxamisekileyo
UkuKhangela kweNjini yokuKhangela (i-SEO) yenye yeendlela zokunyusa ukugcwala kwabantu kunye nokuchazwa kwewebhusayithi. Asiyonto eyodwa, kodwa iseti yemisebenzi ejolise ekuphuculeni isikhundla sewebhusayithi yakho kwenjini yokukhangela kwizicelo ezithile. Nokuba indawo efanelekileyo ifuna ukunyuselwa, kungenjalo, abaphulaphuli be-intanethi abayi kwazi ngobukho bayo. Le yeyona njongo yokuphucula i-SEO.
Namhlanje, i-SEO iya iba yinto eqhubekayo. Inyani yile, iinjini zokukhangela zihlala zihlala ziba nzima ngakumbi, ke akusoloko kucacile ukuba zingaphi izicelo eziyimfuneko zokugcwalisa inqaku le-injini yokukhangela ukuba ulithumele ngqo eqongeni. Ngamanye amagama, ienjini zokukhangela ziya zijonga ngakumbi ukuba umxholo uphononongwa njani ziindwendwe zewebhusayithi. Iiparamitha zingenakubalwa. Eli lixesha elingumndilili umntu alichitha kwiwebhusayithi kunye notshintsho kunxibelelwano lwangaphakathi. Kukwabalulekile ukuba umsebenzisi abelane ngekhonkco kwiibhloko zewebhu, iinethiwekhi zentlalo, kunye namanye amaqonga.
Ukuba ulwazi olukwiphepha liphelelwe lixesha, undwendwe luya kuvala umthombo. Ukuba undwendwe lubona iphepha elinombhalo oqinileyo ogcwele amabinzana aziintloko-uya kulishiya. Ukukhethwa kwendlela yokunyusa i-SEO kuxhomekeke kwinjongo yayo. Kwiimeko ezininzi, abathengi bafuna ukunyuka kweendwendwe kwiwebhusayithi yabo okubangela ukukhula kweefowuni, iiodolo, ukuthengisa. Kodwa kukho abathengi abanjalo, abafuna ngokulula ukubona indawo kwizikhundla eziphezulu kwiinjini zokukhangela ngakumbi iinjongo zokwenza uphawu. I-Semalt inezisombululo ezifanelekileyo zecala ngalinye. Siza kujonga ngakumbi ezona phulo zinemveliso malunga nokukhuthaza i-SEO, njenge-AutoSEO kunye ne-FullSEO.
Isebenza njani i-AutoSEO
Iphulo le- AutoSEO lokunyuswa kwewebhusayithi sele lisasazekile phakathi kwabanini bendawo kutshanje. Isiphumo sokugqibela siqwalaselwe ukukhuthaza iwebhusayithi yakho kwizikhundla eziphezulu kwi-injini yokukhangela. Inemigangatho eliqela yokunyanzelwa kwaye yenziwa ngokusebenzisana okungqongqo kunye nochwephesha weSemalt. Iingcali zithatha uxanduva olupheleleyo lwephulo kwaye ziqinisekisa ngesiphumo esiphumelelayo. Uyilo lwewebhusayithi luya kutshintsha ngokufanayo ekhokelela kwinkqubela ebonakalayo kwi-injini yokukhangela. Ukushwankathela umsebenzi olandelayo, sinokuqaqambisa le misebenzi ilandelayo ye-AutoSEO:
Ukukhetha amagama aphambili;
ulungiso lwempazamo kwiwebhusayithi;
ukwenza amakhonkco kwiiwebhusayithi ezinxulumene niche;
Ukuqala umkhankaso we-AutoSEO, kuya kufuneka ubhalise kwiwebhusayithi yethu. Uhlalutyo lwewebhusayithi luqala ukusebenza, kwaye ufumana ingxelo yokuqala ngemeko yendawo yakho kwi-injini yokukhangela. Ubume bewebhusayithi buye bahlaziywa ngokuhambelana nayo yonke imigangatho ye-SEO. Uyaqhubeka nokufumana iingxelo ngolwazi olwahlukileyo, kubandakanya noluhlu lweempazamo ezichongiweyo. Uthatho-nxaxheba lwakho kwinkqubo ihlala incinci, zonke iimpazamo zishenxiswa yinjineli yethu ye-SEO. Injini ye-SEO iya kukhetha namagama aphambili. Eli nqanaba liyafuneka ukukhulisa ukugcwala kwiwebhusayithi.
Ngoku kubalulekile ukukhetha amakhonkco e-intanethi ngokuchanekileyo ukuze uwafake kwizibonelelo ezithile ze-Intanethi. Umxholo wewebhusayithi kufuneka ulunge kakhulu, njengoko injini yokukhangela ibona kuphela umxholo onelizwi elinentsingiselo. I-Semalt igxile ekukhetheni izixhobo ezifanelekileyo zokufakelwa kwezinye izixhumanisi. Zonke iintshukumo ezenziwe yingcali azinabungozi ngokupheleleyo kwiwebhusayithi; Ngaphandle komphathi ubeka esweni inkqubo.
Inyathelo elilandelayo kukwenza utshintsho olufanelekileyo kwiwebhusayithi. Iingcali zikhokelwa lulwazi oluvela kwingxelo kunye ne-FTP (iProtokholi yokuGqithisela iifayile). Utshintsho ngalunye lubanegalelo ekusebenziseni ukulunga, ngoko ke eli nqanaba lifuna ulwazi oluphambili ekukhuthazeni i-SEO kunye nokuchaneka okukhulu. I-Semalt iyazi konke ukuhlaziya kwinqanaba kunye nokufaka amagama ayimfuneko ngexesha. Amagama aphambili akhangelwe ukuba angqinelane nomxholo ngaphambi kokufaka isicelo. Ukuhlaziya kuqhubeka kuhamba; usahleli njengombukeli erekhoda iziphumo ezintle. Ukuqhuba umkhankaso we-AutoSEO kungaphelanga inyanga kubiza i- $ 99.
Yintoni ekufuneka uyazi malunga ne-FullSEO
Ukususela kwasekuqaleni, kuya kufuneka kuqatshelwe ukuba umkhankaso we-FullSEO ngowokuphucula iwebhusayithi ngexesha elifutshane elininzi elinokwenzeka. Eli phulo libonelela ngokusebenza ngaphandle nangaphakathi kwiwebhusayithi. Inkqubo ibandakanya amanqanaba aliqela apho nganye kuzo yenzelwe ukuphakamisa umgangatho wewebhusayithi. Iphulo lijongwa ngumphathi onamava, ngelixa iintshukumo zenziwa ngokuthe ngqo ngcali ye-SEO. Ukusebenza kwe-FullSEO kuqinisekiswa ziziphumo ezikhawulezayo zesikhundla esiphezulu sewebhusayithi kwi-injini yokukhangela. Ngaphandle koko, ayivumeli abantu okhuphisana nabo ukuba basondele kwisikhundla sewebhusayithi yakho.
Ukuqaliswa kwephulo le- FullSEO kuqala ngokukhawuleza ukubhalisa kwakho kwiwebhusayithi yethu. Ukubhaliswa okugqityiweyo kuthetha ukuqala kokuhlahlelwa kwewebhusayithi. Inqanaba lokuqala lentsebenzo yangaphakathi. Kubandakanya ukujonga ubume bewebhusayithi kunye nokunikezela ingxelo eneenkcukacha ngesiphumo sohlalutyo. Ukongeza, ingcali ye-SEO ihlolisisa ngononophelo onke amalungu esiza kwaye ichonge eyona nto iphambili. Ingxelo elandelayo ibonisa zonke iimpazamo ezichongiweyo, ezilungiswa ngokukhawuleza. Ukwenza amandla kuqhubeke kuhamba. Ukonyusa ukugcwala kwiwebhusayithi, kufuneka sithathe amagama afanelekileyo. Onke amagama aphambili akhethwe ngononophelo olukhulu, njengoko edlala indima ebalulekileyo ekukhuthazeni. Ngokufikelela kwi-FTP, ingcali yenza utshintsho olufunekayo kwiwebhusayithi.
Inqanaba lesibini kukusebenza kwangaphandle. Kubandakanya ukufakela amakhonkco kwizibonelelo ze-niche. Kubalulekile ukuba umxholo wakho uhambelane nezixhobo. Nje ukuba amakhonkco afakiwe, iwebhusayithi iqala ukwanda ngokuzenzekelayo. Uxanduva olukhulu kubaqeqeshi bethu be-SEO kwinkqubo yokukhetha amakhonkco afanelekileyo kunye nezixhobo ezinokuthenjwa. Ngethamsanqa, uSemalt usebenzisana neewebhusayithi ezahlukeneyo eziqinisekisiweyo ezihlangabezana nemigangatho ye-SEO. Amakhonkco afakwe kwezi ndawo anegalelo ekukhuthazeni ngempumelelo. Umsebenzi wakho wephulo akuyimfuneko, kodwa uhlala usazi ngalo lonke utshintsho olwenziwe kwiwebhusayithi. Iingxelo ezihlala zikwazisa malunga nokukhula komgangatho wempembelelo. Kwakhona, unganxibelelana nengcali nangaliphi na ixesha kwaye ufuna naluphi na ulwazi olunxulumene nendawo yakho.
Ukuba, ngasizathu sinye, ukunyuswa kwe-SEO kunqunyanyisiwe, akuyi kuzisa iingxaki ezinkulu. Ewe, iGoogle iyakususa i-backlinks kwindawo yogcino lwedatha kwisithuba esingangenyanga, kodwa i-rankings iya kuhlala ikwindawo ethile. Esi sikhundla asiweli ngaphantsi kwenqanaba elaliphambi kokuqala kwe-FullSEO. Ukubala iindleko zenkonzo, kufuneka wenze isigqibo kuqala. Ixabiso lokugqibela liya kugqitywa emva kokuba iwebhusayithi yakho ihlolwe yingcali ye-SEO. Ixabiso alizukubonakala liphezulu kakhulu, kodwa lixhomekeke kwimeko yewebhusayithi yakho. Ngayiphi na imeko, zonke iindleko zihlawula kathathu ixabiso.
Umgaqo ophambili wokusebenza kwe-SEO sisicwangciso esifanelekileyo. Ukuba iwebhusayithi izele ziimpazamo zesalathiso kwaye ineengxaki zobugcisa, ekuphela kwendlela yokuqokelela idatha yohlalutyo. I-Semalt idale inkqubo yohlalutyo eyahlukileyo evumela ukuqhuba ukuvelisa. Olu luhlalutyo, inkqubo yokuphicothwa kwewebhu iwebhusayithi eyalelwa ukuba ichonge iimpazamo zobugcisa kunye nokulungiswa kwazo. Onke amanyathelo athathiweyo aya kuba negalelo kuphumelelo lwewebhusayithi. Ukongeza, ii-Analytics zinika ukufikelela kwiidatha zakho zokhuphiswano. Uhlalutyo lubandakanya le misebenzi ilandelayo:
isiphakamiso segama eliphambili
ukubeka esweni uphawu
Uhlalutyo alunimida ekuchongeni ubunzima obuhambelana nokukhuthaza iwebhusayithi. Okokuqala, inquma umxholo wesicatshulwa kunye neparamitha yayo yobugcisa. Yenza uhlalutyo lokuthelekisa lwewebhusayithi ezikhuphisana nabo, kuvavanya ukulunga kwabo kunye nezinto zabo. Ingqokelela yohlalutyo iqala emva kobhaliso kwiwebhusayithi yethu. Ingxelo yokuqala ibonisa indawo yakho kwindawo yokukhangela. Iiwebhusayithi zakho zokhuphiswano ziyahlalutywa. Ke ngoko, ubume becandelo labo baziwa ngokupheleleyo. Kwisiseko sololu lwazi, iingcali zifezekisa utshintsho oluyimfuneko, kuthathelwa ingqalelo imigangatho ye-SEO.
Ukuba uneakhawunti efanelekileyo, unokongeza ezinye iisayithi kwikhabhathi yakho. Zonke iiwebhusayithi ezongeziweyo ziyahlaziywa ngokuzenzekelayo, kwaye ufumana ingxelo eneenkcukacha ezineenkcukacha ezifunyenweyo. I-algorithms ze-injini yokukhangela zihlaziywa ngamandla, kuphela ngabahlalutyi bethu abayazi ngokuchanekileyo indlela yokuguqula iwebhusayithi ukuba ibe phezulu kakhulu kwi-injini yokukhangela. Ngokudibanisa idatha yohlalutyo, kuya kuba lula ukuchaza amagama achanekileyo. Uhlalutyo lukhombisa amagama aphambili ahambelana nomxholo wewebhusayithi. Ngalo naliphi na ixesha, unokongeza amanye amagama aphambili okanye ususe engafunekiyo. Le nkqubo iya kuba nefuthe elihle ekukhuleni kokugcwala kwewebhusayithi.
Inkqubo yohlalutyo yenziwa ngexesha lonke ngaphandle kokuthatha inxaxheba. Ufumana ingxelo yomsebenzi kunye neziphumo zazo zonke isenzo. Iziphumo zihlala zimangalisa, kuba ubona ukuphumelela kwewebhusayithi kwi-injini yokukhangela. Ujonga isikhundla somntu okhuphisana nabo, kwaye abaHlaziyi bathatha amanyathelo avumela iwebhusayithi yakho ukuba ibadlula kubo bonke. Le yinyani ebonakalayo, iwebhusayithi yakho iya kuhlala iyindawo ephezulu. Kulunge kakhulu ukusebenzisa isiCwangciso seNkqubo yokuSebenzisa. Nge-API, yonke idatha idityaniswa ngokuzenzekelayo. Uhlala uyazi ngohlaziyo, nangona ungenzi imizamo. Kukho intlawulo esekwe ngenkonzo yohlalutyo. USemalt uphuhlise ezi phakheji zilandelayo ze-Analytics:
I-STANDARD - $ 69 ngenyanga (amagama angama-300 aphambili, iiprojekthi ezi-3, imbali yeenyanga ezi-3);
UPHANDO-I-99 yeedola ngenyanga (i-1 000 yamagama aphambili, iiprojekthi ezili-10, imbali yobume be-1)
I-PREMIUM - $ 249 ngenyanga (amagama angama-10 000 aphambili, iiprojekthi ezingenamkhawulo).
I-Semalt ikwabonelela ngeenkonzo ezininzi zophuhliso lwewebhu. Iingcaphephe zisebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokwenza iwebhusayithi yokuthengisa. Ke, izinto zewebhusayithi ziyilwe ngokukuko, zidityaniswa nokusetyenziswa komntu wesithathu kunye neNkqubo yoLawulo lweMxholo. Imfuno enkulu yabathengi igubungela ukubonelela njengeemodyuli zokuphela okukhethekileyo zorhwebo kunye nee-API.
Ividiyo yokuNyusa ngoSemalt
Ishishini liphumelela kuphela xa imveliso yabo ibangela impendulo kwiimvakalelo ngaphakathi kwabathengi. Intengiso yeVidiyo yeyona fomathi iqhelekileyo eqinisekisa ukukhuthaza ngokusebenzayo iimpahla kunye neenkonzo. Ividiyo enjalo izisa i-traffic ngakumbi kwiwebhusayithi yakho, yiyo loo nto uSemalt eye wavelisa iMveliso yeVidiyo yokuKhuthaza . Ividiyo eyenziwe ngathi ibonakalisa zonke izibonelelo zenkampani yakho. Sinikezela ngeevidiyo ezikhethiweyo zetemplate nangokhetho lwakho. Ixabiso lesibini ukhetho lihlukile kwaye limiselwe emva kokuba iprojekthi ixoxiwe. Ividiyo yokuKhuthaza iqinisekisa impumelelo kwishishini lakho.
Inqaku libonisa ngokucacileyo izibonelelo zokusebenza noSemalt. Ngapha koko, izibonelelo zibaluleke ngakumbi. Asinakuze sibanike izithembiso ezingenamsebenzi, kuba eyona nto ayisiyonyani kwiwebhusayithi. Sizimisele ukukwenza ube sisityebi ngazo zonke iindlela ezikhoyo. Impumelelo yakho kukuchuma kwethu, ke ukhulise ishishini lakho ngoSemalt. Sukuchitha ixesha lakho. Nxibelelana nathi kwangoko. Sinezitshixo zempumelelo yakho!